Sida Loogu Diyaar Garoobo Mammogram-kaaga Sanadlaha ah
A mammografi waa qaab raajo ah oo u mariya qadar yar oo shucaac ah unugyada naaska ee Columbus, OH. Sidan ayaa ah sida kooxdeenu u ogaan karto koror kasta ka hor intaysan weyneyn oo la heli karo inta lagu jiro baaritaanka naasaha ee billaha ah. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan u isticmaalnaa tijaabadan si aan u helno koriimo ay adkaan karto in si qoto dheer looga helo nudaha naaska. Markii hore ee la helo, way fududahay inay daweeyaan. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah baaritaanka kahortaga caafimaadka haweenka.
Waa maxay raajada naasaha?
Waxaan ku qabannaa laba nooc mammogram xafiiskeena Columbus, OH, oo ay ka mid yihiin:
Baadhitaan: Aaladda baaritaanka, waxaa la sameeyaa marka bukaanku uusan lahayn wax calaamado ah dhibaatada oo dhan.
Cillad-baaris: Baaritaanka naasaha ee mammogram-ka ah ayaa la dalbadaa markii adeeg-bixiyuhu ogaado dhibaatada oo uu doonayo aragti dhow.
Kumaa ah in la sameeyo raajada naasaha?
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan kugula talineynaa inaad sameysid baaritaanka aasaasiga ah ee mammogram-ka hal mar inta udhaxeysa da'da 35 - 39. Kuliyada Mareykanka ee Dhakhaatiirta Haweenka iyo Dhakhaatiirta Haweenka waxay kugula talineysaa dhammaan dumarka 40 iyo wixii ka weyn inay yeeshaan mammogram sanadkii. Dumarka oo dhan waxay u baahan yihiin midkood iyadoon loo eegin cabirka naasahooda, inay leeyihiin naaso lagu rakibay iyo haddii kale, ama haddii ay naas-nuujin sameeyeen.
Waxaan kugula talin karnaa raajada naasaha goor hore haddii aad leedahay arrimo qatar ah oo qaarkood. Waxyaabaha halista ah waxaa ka mid ah:
Qof reer ah oo kansarka naasaha ku dhacay (walaasheed, hooyo, ama gabadh)
Waxaad horey ugu dhacday kansarka naasaha ama kansar kale
Waxaad la kulantay caadada hore
Waxaad la kulmaysaa xilli dambe oo ah xilliga dhalmo-dayska
Astaamo noocee ah ayaa tilmaamaya baahida loo qabo raajada naasaha?
Waxaan dalban karnaa baaritaanka naasaha haddii bukaan uu ku dhaco mid ka mid ah astaamahan:
Kobcin aan la garanayn ama is weyneysiinta naaska ama kilkilaha
Yaraanshaha maqaarka naaska
Dheecaan aan caadi ahayn
Isbeddel dhowaan ku yimid sida ibta ama maqaarka naaska u egyahay
Waa maxay MammoPad®?
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan bukaankeena siineynaa xulashooyinka MammoPad, oo ah barkinta naaska oo hal mar la isticmaalo oo bixisa dusha ka ilaalin jilicsan oo diirran inta udhaxeysa naaska iyo mashiinka naaska. Tani waxay si weyn u kordhisaa raaxada baaritaankaaga xafiiskayaga Columbus, OH. Waa FDA la ansixiyay, bukaannadeenana waxay soo sheegaan ku dhowaad 50% yareynta raaxo-darrada inta lagu jiro baaritaanka mammogram-ka.
Tilmaamaha udiyaarinta mammogram
Kahor baaritaanka naasahaaga, waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo aad ku heli karto booqasho raaxo leh, oo ay ka mid yihiin:
Xidho labis laba qaybood oo raaxo leh.
Timahaaga dib ha ugala bixin wejigaaga, iskana ilaali inaad xidhato hilqado.
Ka fogow xirashada nooc kasta oo ah kiriim, uumenti, ama budo naaskaaga ama gacantaada hoosteeda.
Qaado dawada xanuun joojiyaha miiska lagaa iibsado ka hor ballantaada si loo yareeyo raaxo-darradaada. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay bukaanada jilicsan naaska.
Jooji cabitaanka cabitaannada kafeega leh iyo cunista shukulaatada illaa toddobo maalmood ka hor ballantaada, maadaama daraasaduhu soo jeedinayaan in labaduba ay horseedi karaan raaxo-darro sii kordheysa.
Soo qaado wixii filim ah ee hore ee raajada naasaha ah ballantaada haddii lagu samaynayay xarun kale. Tani waxay kaa caawin doontaa in laga fogaado wixii daahitaan ah ee cudurka.
Qaar ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan raajada naasaha waxaa ka mid ah:
Miyaan cuni karaa raajada raajada ka hor? Looma baahna in la soomo ka hor baaritaanka mammogram-kaaga. Waad cabi kartaa, cuni kartaa, oo qaadan kartaa daawo sidii caadiga ahayd.
Mudo intee leeg ayuu qaataa mammogram? Tani waxay kuxirantahay nooca raajada naasaha ee lagaa qaadayo. Raajada naasaha ee 2-D waxay qaadataa qiyaastii 15 daqiiqo, halka midka 3-D ah uu qaadan karo illaa 30 daqiiqo.
Mammogram-ka ma keeni karaa nabar? Waa wax caadi ah in xoogaa nabarro lagu sameeyo raajada mammogram ka dib. Si kastaba ha noqotee, jilicsanaan kasta ama raaxo-darradu waa inay hoos u dhigtaa maalin ama laba maalmood. Haddii aad wali xanuun dareemeyso tan kadib, la xiriir xafiiskayaga.
Jadwal jadwalka raajada nafsaddayda caafimaadkayga ka hortagga ah
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan ku bixinaa baaritaanka mammogram-ka xafiiskayaga Columbus, OH. Waxaan kugula talineynaa inaad jadwal u sameyso mammogram-kaaga usbuuc kadib mudadaada si loo yareeyo damqashada naasaha iyo caabuqa. Si aad u ballansatid ballantaada raajada naasaha, fadlan call kooxdeena xirfadeed maanta.
Goobta Westerville Goobta Columbus Goobta Dublin Mammografi